Vaovao - Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sideboard sy Buffet
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sideboard sy Buffet
Ny sideboards dia mety ho tonga amin'ny endriny maro karazana sy amin'ny endriny maro samihafa. Ny sisin-tany maoderina dia matetika manintona ary mety manana tongotra somary lava kokoa noho ny sideboard nentim-paharazana.
Rehefa apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny sideboards dia afaka miasa ho ivon'ny fialamboly. Noho ny habetsaky ny toerana fitahirizany ary ny ankamaroan'ny televiziona afaka mahazo aina tsara eo amboniny, ny sideboards dia misafidy tsara ho an'ny ivon-toerana fialamboly.
Rehefa apetraka amin'ny tranom-bahiny, ny sideboard dia azo ampiasaina hitsena ny vahiny amin'ny toerana izay mitahiry lakile, paositra ary entana haingon-trano.
Buffet, toy ny sideboard ihany, dia fanaka misy fitoerana mitahiry lava sy ambany. Ny buffet matetika no fanaka be indrindra eo amin'izy roa. Ny Buffet dia matetika manana kabinetra lehibe kokoa sy tongotra fohy kokoa izay mametraka azy hipetraka ambany amin'ny gorodona.
Ary farany, ny buffet sy ny sideboard dia anarana azo ovaina ho an'ny fanaka iray ihany. Ny anarana dia miova arakaraka ny fametrahana ny fanaka. Ny sideboard apetraka ao amin'ny efitrano fisakafoana dia antsoina hoe buffet, fa rehefa afindra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izy io dia antsoina hoe sideboard.
Ny buffet dia toy ny fanaka fitehirizana lehibe ho an'ny efitrano fisakafoanao. Ny volafotsy, ny lovia fandrosoana ary ny rongony dia matetika voatahiry ao anaty buffet. Ny latabatra ambany ataon'izy ireo dia manome faritra malalaka hanaterana sakafo, kafe, na dite rehefa misy mpitsidika.
Fotoana fandefasana: Dec-19-2020